चार हजार धरौटीमा आस्था राउत रिहा - VON TV
१४ माघ २०७६, मंगलवार १३:४३ 100 ??? ???????
गायिका आस्था राउत रिहा भएकी छिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको आदेशमा चार हजार रूपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी आज रिहा भएकी हुन् ।
सोमबार नै काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई चार दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएकोमा आजै रिहा गरिएको छ । यस अघि प्रहरी हिरासतमा रहेकी गायिका आस्था राउत अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । उनी सोमबार बेलुकी त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लु क्रस अस्पतालमा भर्ना भएकी हुन् ।
राउतलाई टाउको दुख्ने र ज्वरो समस्या आएपछि उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो । आस्था सोमबार परिवारसहित आफैं प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन् ।
२ हप्ता अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भद्रपुर जाने क्रममा त्यहाँ सुरक्षार्थ रहेकी प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठसँग भनाभन भएपछि आस्था विवादमा आएकी थिइन् । प्रहरी जवान श्रेष्ठको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत माघ ५ गते आस्थाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।
पोर्चुगलमा नयाँ कोरोना भाईरसका ५९ जना संकास्पद , २ को परिक्षण हुन बाँकी – हालसम्म कोरोनाभाइरसको कुनै पुष्टि भएका घटनाहरू छैनन् !